Banyere Anyị - SUNKON Intelligent Technology Co., Ltd.
Ndị otu ọrụ
SUNKON bụ ọkachamara emeputa nke iko miri-nhazi akụrụngwa na China. Ụlọ ọrụ anyị na -ahụ maka nrụpụta igwe nhazi iko. Ọmụmaatụ: igwe na -edezi iko kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe na -agba iko, igwe na -agba iko, igwe na -asacha iko, igwe na -ete iko iko na ihe ndị ọzọ. nwere ngwa nrụpụta ọkaibe, ngwa nyocha ezigbo mma, imewe siri ike yana arụpụta ihe. Anyị na -ekwe nkwa ịdị mma “efu”.
Anyị na -etinye onwe anyị n'inye ndị ahịa ihe akụrụngwa nhazi iko zuru oke, na mmụọ nke "siri ike, oke, ọganihu, ihe ọhụrụ". ị! A na -eji igwe iko SUNKON eme ihe n'ụwa niile dịka USA, Australia, Turkey, Mexico, Brazil, Russia, Kazakhstan, Armenia, Syria, Saudi Arabia, lran, Morocco, Tunisia, Cambodia, Thailand, Philippines, Vietnam, India, Pakistan na wdg Ihe ịga nke ọma na-arụkọ ọrụ na ihe karịrị ndị na-emepụta iko iko 1000 wee nye ihe karịrị 4500 SETS akụrụngwa n'ụlọ na mba ofesi.
Anyị nọ na etiti Eshia, yana atụmatụ amụma zuru oke yana mgbasa dị mma. Na ahịa mba ụwa, anyị nwere ahụmịhe azụmaahịa tozuru oke ma kwụsie ike.
N'ihi ọnọdụ dị mma, yana site na ikere òkè nke ihe ngosi mba ụwa na oke mmetụta dị ukwuu, ọ na -adịrị ụlọ ọrụ anyị mma iji mee ka mmepe na nkwalite azụmaahịa igwe na -arụ ọrụ dị elu. , wdg.
SUNKON (CGTECH) lekwasịrị anya na nyocha na mmepe nke igwe na teknụzụ. Ihe karịrị afọ iri gara aga, anyị eguzobela etiti R&D mpaghara anyị, anyị na-ekwusi ike n'ịmepụta na imezi igwe mgbe niile. esetịpụrụ ngwa n'ụlọ na mba ofesi.
afọ ndị a, igwe SUNKON (CGTECH) nwetara aha ọma n'aka ndị ahịa anyị na China na ahịa ụwa.
SUNKON (CGTECH) bụ onye nrụpụta ọkachamara maka ụdị igwe eji arụ iko, yana 5,000m2 nke osisi. Ihe karịrị ndị na -ahụ maka teknụzụ 3 & ndị injinia nwere ahụmịhe dị ukwuu na inct imewe igwe na nhazi iko ihe karịrị afọ 15, ihe karịrị ndị ọrụ aka ọrụ 50. Guzobere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke yana ezigbo njikwa na sistemụ nyocha, nkọwa nke igwe anyị niile ka o kwere mee iji nweta mmesi obi ike nkwarụ “ZERO”.
Igwe eji edezi Nkume 45, Ngwa ụlọ Glass Edging Machine, Igwe na -agbanwe igwe na -agbanwe agbanwe, Nkume Nkume 45 Degree Machine, Ngwongwo Nkume Nkume, Igwe Miter Glass,